Ukubuyekezwa kwe-Marathonbet yase Ningizimu Afrika ye-Sportsbook
Ikhaya / i-marathonbet yase ningizimu afrika
I-Marathonbet yase Ningizimu Afrika
Ukubheja Imikhiqizo Nemidlalo: I-baseball, i-Basketball, i-Boxing, i-Chess, i-Cricket, i-Cross Country Skiing, i-Cycling, i-Darts, i-e – Ezemidlalo, i-Floorball, iBhola, igalofu, umjaho wamahhashi, i-Rugby Union, iTennis Tennis, iTennis, iVolleyball, imidlalo ebukhoma, iCasino, Amakhasino Abukhoma nokuningi
Ukubheja okuncane / okuphezulu: Ukubheja okuphansi nokungaphezulu kungahluka ngokuya ngezici ezifana nemakethe obheja kuyo, izilungiselelo ze-akhawunti yomsebenzisi, njll.
Ukukhishwa kweMin / Max :: Ukuhoxiswa okuncane kungama- € 5 ezimeni eziningi. Ukuhluka okuphezulu kokukhipha kusetshenziswa indlela yokuhoxa esetshenziswayo.
Imali :: Amarandi aseNingizimu Afrika (i-ZAR), iDola lase-Australia, iDola laseCanada, i-Euro nokuningi
Ibhonasi Yokwamukela: NA
Isilinganiso: 4.1 / 5
IMarathonbet yaziwa ngomusa wayo okhonjiswa ngendlela yamabhonasi nezenyuso. Nganoma yisiphi isikhathi, ungaqiniseka ukuthi le sportsbook inenqwaba yamabhonasi aqhubekayo nokwenyuswa.
Amabhonasi atholakalayo makhulu kakhulu, yingakho lesi sigaba siphinde sahlukaniswa ngezigaba eziyisithupha – 0% Margin, Marathonbet Club, Casino, Live Casino, Virtual Sports nokunye.
Ngesikhathi sokubhala, kunamabhonasi afinyelela kwangu-17 anikezwa eMarathonbet. Kulesi sibuyekezo, sizohlanganisa amabhonasi ambalwa amakhulu. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi amabhonasi anemininingwane engezansi akhona manje ngesikhathi sokubhala futhi angashintsha ngokuhamba kwesikhathi.
Ibhonasi Yokwamukela: Ukuntuleka kwebhonasi yokwamukela ukuheha abadlali abasha nokubenza babhalise kubonakala kuyinto exakile. Ukusho lokho, iMarathonbet ngokuqinisekile yenzela ukungabikho kwebhonasi eyamukelekile nenqwaba yeminye okunikezwayo.
Ngezansi kunenye yama phromoshini ne sports book ezisebenzayo zokubheja ezemidlalo ongazithola futhi uzijabulele.
I-Advancebet: Lokhu kungumnikelo oyingqayizivele weMarathonbet okuyinto enhle uma ufika ekusebenzeni kwayo. Okokuqala, masikucacise ukuthi yini i-Advancebet engeyona – akuyona indawo yokuthenga ngesikweletu. Ngakho-ke, yini? Yebo, i-Advancebet ngokuyisisekelo ivumela abadlali abaphansi, kodwa abanokubheja okungazinzile ku-akhawunti yabo ukuqhubekisela phambili ukubheja okudlula inani lemali abalishiyile ngokuya ngokuhlola okwenziwe ngomphumela wokubheja kwabo okungazinzile.
Ukuqinisekiswa Okungcono Kakhulu Kwezimo: Okungcono kakhulu okuqinisekisiwe ukukhushulwa okusebenzayo ezimakethe zokugijima kwamahhashi nezimakethe zokugijima ze-grey hound kuphela. Le phromoshini isebenzela ukubheja kokuwina nokubheja kwendawo, noma ngabe ukubheja okukodwa noma ukubheja okuningi. Indlela esebenza ngayo ukuthi iMarathonbet kwesinye isikhathi inikela ngamathuba amahle kakhulu emijahweni ethile yamahhashi nemijaho yegreyhound. Ngakho-ke, uma ubungathatha intengo yokuqala emijahweni enjalo egqanyisiwe ekubhejeni kwakho futhi i-SP inkulu, khona-ke ukubheja kwakho kukhokhwa ku-SP.
Ukubheja kwamahhala: Izikhathi eziningi, i-Marathonbet inikeza ukubheja kwamahhala kubadlali bayo njengengxenye yezinyuso ezahlukahlukene nokunikezwayo. Uma kwenzeka ufanelekele ukubheja mahhala futhi uthole eyodwa ku-akhawunti yakho, ungabeka ukubheja ngaphandle kokubeka noma iyiphi imali yakho kulayini. Ukubheja okunjalo kwamahhala kungasetshenziswa kuphela njengokubheja okuphumelelayo kumcimbi owodwa wezemidlalo owuthandayo.
Uhlelo Lokuthembeka lweMarathonbet: Uhlelo lweMarathonbet Loyalty luhlelo olususelwa endaweni lapho uqoqa khona amaphuzu wokubheja kwezemidlalo afanelekile futhi lawa maphuzu kamuva angasetshenziswa ukuthola izinzuzo ezitholakala kukhathalogi yamabhonasi. Amaphoyinti okuthembeka anikezwa kuphela ukubheja kwezemidlalo okuyisilinganiso esiphansi okungenani sama- € 10 noma imali elinganayo futhi aphikisana nokungenani okungu-1.30. Uzothola amaphuzu we-comp kuphela ngemuva kokuthi ukubheja sekukhokhelwe.
Ungabhalisa kanjani e-Marathonbet
I-Marathonbet iyilungu lezemidlalo kuphela lapho udinga ukubhalisela i-akhawunti ukuze ukwazi ukubheja ngemali yangempela yezemidlalo. Inqubo yokubhalisa ijwayelekile, iyazichaza, futhi ithatha imizuzu embalwa. Ngokusebenzisa okungenamkhawulo i-akhawunti yakho futhi ikakhulukazi ukuze ukwazi ukukhipha imali kwi-akhawunti yakho yeMarathonbet, kuzodingeka futhi ukuthi i-akhawunti yakho iqinisekiswe.
Inqubo yokuqinisekisa ingabandakanya ukulayishwa kwemibhalo ethile efana ne-ID ekhishwe uhulumeni, ubufakazi bekheli ngisho namakhophi ahlolwe ngaphambili nangemuva kwekhadi lakho lasebhange (uma uzolisebenzisa elilodwa).
Ukuze ibhola ligingqike, okokuqala udinga ukubhalisela i-akhawunti yeMarathonbet. Inqubo yokubhalisa ilula futhi iyashesha. Landela lezi zinyathelo ezingezansi zokubhaliswa kwamahhala.
Iya kuwebhusayithi ye-Marathonbet ku-PC noma kuselula yakho
Lapho ikhasi lokufika kweMarathonbet livela, chofoza noma thepha ithebhu ebomvu ethi ‘Joyina Manje’ etholakala ngasekhoneni eliphezulu kwesokudla sekhasi lewebhu.
Manje usuzophinde uqondiswe kufomu lokubhalisa elidinga ukugcwaliswa, ifomu linesihloko noma isihloko esithi “Joyina” ngefonti ebomvu ebomvu.
Izwe lakho litholwa ngokuzenzakalela ngekheli lakho le-IP. Kodwa-ke, uma inani elakhiwe ngokuzenzakalela kungelilo izwe lakho lapho-ke unenketho yokulishintsha ngesandla.
Faka imininingwane elandelayo njengoba utshelwa yifomu lokubhalisa ezindaweni zalo zokufaka ezifanele – idolobha / idolobha, isihloko, igama lokuqala, isibongo, usuku lokuzalwa, ikheli le-imeyili, lungiselela iphasiwedi uphinde uthayiphe iphasiwedi ukuqinisekisa, inombolo yocingo enekhodi yezwe, setha igama lomsebenzisi ozolisebenzisa esikhathini esizayo, khetha umbuzo oyimfihlo bese uthayipha impendulo yakho (lokhu kungasetshenziselwa ukuthola i-akhawunti), khetha indawo yakho yesikhathi nemali oyikhethayo, bese uchofoza ukujoyina manje.
Uyacelwa ukuthi wazi ukuthi ngokubhalisela i-akhawunti ye-Marathonbet, wamukela imigomo nemibandela yabo kanye nenqubomgomo yobumfihlo. Uyaqinisekisa futhi ukuthi ungaphezu kweminyaka esemthethweni yokugembula engu-18.
Ukubeka Ukubheja Kwakho Okokuqala
Ukubeka ukubheja kulula futhi kuklanyelwe ukusebenza emigqeni efanayo yokuthi ungabeka kanjani ukubheja endaweni yokubheja yezemidlalo yendabuko esezingeni lomhlaba. Inqubo yokubheja isebenza eduze kwe-‘Betslip ‘. Singafingqa ukuthi ungabheja kanjani ngamagama amathathu – irejista, idiphozi nokubheja.
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi lezi zinyathelo ezenqubo yendabuko yokubheja. Kukhona nenketho yokubheja ngokuchofoza okukodwa ongayinika amandla. Kodwa-ke, siluleka abaqalayo ukuthi basebenzise umthetho olandelwayo wokubheja ngaphambi kokudlulela enkethweni esheshayo yokuchofoza okukodwa.
Iya ekhasini lasekhaya lewebhusayithi ye-Marathonbet bese ungena ngemvume ku-akhawunti yakho
Ekhoneni eliphezulu kwesokudla sesikrini uzobona iBetslip yakho. Uma ungakhethi lutho, iBetslip izobe ingenalutho. Inhloso ukwengeza ukubheja okukodwa noma ukubheja okuningi kusiliphu sokubheja bese uqhubeka nokuhlola ku-Betslip
Ukwenza ukukhetha ukubheja, kunezindlela ezahlukahlukene. Ungamane uchofoze ekubhejeni okukhonjiswe esigabeni sokudlala noma esigabeni esidumile futhi kuzongezwa ku-Betslip. Kodwa-ke, uma ubheka ukubheja okuthile, ungaqala ngokukhetha imakethe yezemidlalo (Ibhola ngokwesibonelo) bese ukhetha umqhudelwano noma umncintiswano (i-English Premier League ngokwesibonelo) bese ukhetha ukubheja emicimbini ezayo efakwe kuhlu.
Ngale ndlela, ungangeza ukubheja okwengeziwe ku-Betslip noma ungaqhubeka ngokubheja okukodwa.
Uma ufisa ukubheja ngendlela ngayinye, ungamane uhlole ibhokisi le-EW ku-Betslip ngaphambi kokuqhubeka.
Lapho ukubheja sekufakiwe ku-Betslip, udinga ukucacisa ukuthi ufuna ukubheja malini. Kunenkambu encane yokufaka lapho ungafaka khona amadijithi ezinombolo.
Okwamanje lapho ufaka inani lakho lesigxobo ku-Betslip, ukukhokhelwa okungaba khona kubalwa ngokuzenzekelayo futhi kuboniswe.
Uma unokubheja okuningi ku-Betslip eyodwa, udinga ukucacisa inani lesigxobo kulowo nalowo wabo.
Uma usuqedile, buyekeza iBetslip bese wenza noma yiziphi izinguquko uma kudingeka
Ekugcineni chofoza ukubheja kwendawo ukuqinisekisa ukubheja
Uzobona ukuthi inani eliphelele lesiteki seBetslip lizodonswa kubhalansi yakho
Sikufisela inhlanhla ekubhejeni kwakho
I-Marathonbet iphinde inikeze ngenketho yokubheja okusheshayo. Inketho yokubheja okusheshayo ikuvumela ukuthi ubeke ukubheja ngokuchofoza okukodwa. Ngokubheja okunjalo, inani lesigxobo ngokuvamile selivele lisethwe ngokuzenzakalela.
Ezemidlalo ezidumile ongabheja kuzo e-Marathonbet
Kunemicimbi engaphezu kwenkulungwane ongabheja ngayo nsuku zonke eMarathonbet. I-Marathonbet ihlanganisa inqwaba yezimakethe zezemidlalo futhi inikela nangeminye imikhiqizo yokubheja efana namakhasino kanye nezingxenye ezibukhoma zekhasino.
Lapho ufinyelela iwebhusayithi ye-Marathonbet, uzobona imenyu eseceleni ngakwesokunxele sekhasi lasekhaya elibala zonke izimakethe zemidlalo ezahlukahlukene ongabheja kuzo.
Ukuze kufinyeleleke kalula, izimakethe zezemidlalo ezidume kakhulu zibhalwe phezulu kule menyu. Imidlalo edumile ibandakanya i-Bhola, i-Tennis, i-Basketball, i-Ice Hockey i-Volleyball ne-e – Sports. Ungabheja kuyo yonke le midlalo ethandwayo. Izinhlobo eziningi zamaligi, imincintiswano nemicimbi yale midlalo ethandwayo evela emazweni nezinhlangano emhlabeni wonke ziyatholakala ngokubheja.
Ngaphandle kwemidlalo ethandwayo, kunesinye isigaba esibizwa nge-A-Z esibala yonke eminye imidlalo ongabheja nayo. Isigaba se-A – Z sibala le midlalo elandelayo ngesikhathi sokubhala – I-Alpine Skiing, Ibhola laseMelika, Imithetho ye-Aussie, Autosport, Bandy, Baseball, Basketball, Basketball 3×3, Biathlon, Boxing, Chess, Cricket, Cross Country Skiing, Cycling, Darts , e – Ezemidlalo, iFloorball, Ibhola, Igalofu, iGreyhounds, Ibhola Lesandla, Umjaho Wamahhashi, Ice Hockey, iLottery, MMA, Rugby League, Rugby Union, Ski Jumping, Snooker, Specials, Table Tennis, Tennis, Volleyball.
Eminye Imidlalo Etholakala e-Marathonbet
Ukubheja okudlalwa bukhoma
Ukubheja okubukhoma kuyingxenye enkulu ye-Marathonbet sportsbook. Njengoba igama lizisho, ukubhejela bukhoma emidlalweni kubhekisa kwimicimbi yezemidlalo eqhubekayo ngesikhathi sangempela, kepha usavunyelwe ukubheja ngomphumela wale micimbi yezemidlalo. Ngokusobala, njengoba umdlalo noma umdlalo usuqhubeka, akuzona zonke izinhlobo zokubheja ezitholakalayo.
Amakhasino ne-Live Casino
Amalungu e-Marathonbet azokwazi futhi ukudlala imidlalo yangempela yekhasino nge-akhawunti yabo ye-Marathonbet. Ngakho-ke, uma ufuna insizakalo yokugembula online lapho ungabeka khona ukubhejela kwezemidlalo kanye nokudlala imidlalo yekhasino, i-Marathonbet iyindlela enhle. Isigaba sekhasino e-Marathonbet sinikeza izinkulungwane zemidlalo enjengezikhala, ama-jackpots aqhubekayo, imidlalo yetafula, njll kusuka kwabanye babenzi bekhasino abahamba phambili emhlabeni abanjengoMicrogaming, iBooming Games, i-Endorphina, iBooongo, iBetSoft, iHabanero, iSoftBet neminye eminingana.
I-Marathonbet iphinde inikeze isigaba sekhasino esibukhoma lapho ungaxhumana khona nomthengisi obukhoma ekusakazeni kwevidiyo enencazelo ephezulu ngesikhathi sangempela futhi udlale imidlalo yetafula efana ne-blackjack, i-roulette ne-baccarat. Ungaxhumana nabanye abahlanganyeli bekhasino bukhoma etafuleni lakho ngokusebenzisa inketho yengxoxo.
Ngabe i-Marathonbet iqhathaniswa kanjani namanye ama Sportsbooks maqondana neMakethe Yezokubheja kanye Nezithiyo?
I-Marathonbet sportsbook ingenye yezincwadi zemidlalo eziphezulu kuwebhu. Ukuze uhlale ebhizinisini futhi uhehe amalungu, kufanele unikeze ukubheja kwezemidlalo ngokungahambi kahle nokuncintisana. Uma siqhathaniswa nemidondoshiya embonini efana neBet365, singasho ngokuvikelekile ukuthi iMarathonbet inika amathuba okuhambisana nokuhamba phambili embonini, futhi kwezinye izimo, inikeza amathuba amahle kakhulu.
Abadlali abathanda ukubheja ezimakethe zokubheja zesibili njengezigaba zesibili zebhola lesiNgisi (iChampionship) ngokwesibonelo, bazothola izingqinamba ezinhle kakhulu e-Marathonbet sportsbook.
Futhi, uma unentshisekelo ekugijimeni kwamahhashi naku-grey hound racing, khona-ke kufanele wazi ukuthi iMarathonbet sportsbook inikeza ukukhuthazwa okubizwa ngokuthi ‘okungcono kakhulu okuqinisekisiwe’ okuthembisa amathuba amahle kakhulu emijahweni ethile ozoyithola noma kuphi.
Uma kukhulunywa ngezimakethe zezemidlalo ze-niche njenge-floorball, ukushushuluza ngezwe lonke nezinye izimakethe zokubheja ezingathandwa kangako, izingqinamba azizinhle, kepha ziyadlula.
I-Marathonbet App kanye ne Nguqulo Yewebhusayithi Yeselula
Iwebhusayithi ye-Marathonbet iyiwebhusayithi ephendulayo, enobungani ephathekayo ongayifinyelela kusuka kuma-Smartphones namaphilisi ahlukahlukene. Okwamanje, iwebhusayithi yeMarathonbet isekela lezi ziphequluli ezilandelayo – iSafari, i-Chrome, i-Default Android, iSkyfire, i-Opera, i-Opera Beta, iDolphin, iYandex.Browser ne-UC Browser. Ngakho-ke, noma ngabe usebenzisa i-Android, i-iOS noma i-Windows smartphone noma ithebhulethi, uzokwazi ukudlala e-Marathonbet ngesiphequluli sakho seselula.
Ukufinyelela nokudlala, mane uvule isiphequluli sakho seselula, iya kuwebhusayithi ye-Marathonbet bese usebenzisa igama lomsebenzisi nephasiwedi efanayo oyisebenzisa ku-PC ukungena ngemvume nokudlala. Uma ungenayo i-akhawunti, chofoza inkinobho yokujoyina manje bese ubhalisela i-akhawunti ngqo kusuka kuselula yakho.
Uma ukhetha ukusebenzisa iselula yakho ukubheja, lapho-ke sincoma ukuthi ulande uhlelo lokusebenza lwe-Marathonbet. Ngeshwa alukho uhlelo lwe-Windows mobile operating system ngalesi sikhathi, kepha abadlali be-Android ne-iOS bangalulanda uhlelo lokusebenza baluqalise noma nini lapho befuna ukubheja.
Izici zeselula nezinsiza ze-App lokusebenza nezinzuzo
Ezinye izinzuzo zokudlala kuwebhusayithi yeselula yilezi:
Akukho ukulanda okudingekayo futhi akukho ukufakwa okudingekayo
Zonke iziphequluli ezinkulu zeselula zisekelwa
Dlala kusuka kunoma iyiphi idivayisi yeselula noma ngabe uhlelo lokusebenza alufakiwe
Ngeke idle isikhala sediski
Izindleko zedatha yokulanda ziyagwenywa ngoba ukulanda akudingeki
Ezinye izinzuzo zokudlala kuhlelo lokusebenza lweselula yilezi:
Ukufinyeleleka okusheshayo nokusebenza
Beka ukubheja ngokushesha futhi kalula kuselula
Yonga kuzindleko zedatha ngokuhamba kwesikhathi
Inqubo yokulanda nokufaka ayilula futhi ithatha umzuzu nje
Amabhonasi Eselula Nezindlela Zokukhokha
Njengamanje, awekho amabhonasi akhethekile noma amaphromoshini aqondene neselula wabadlali beselula. Njenoba sekushiwo lokho, konke ukukhushulwa okutholakala kunguqulo ye-PC ye-sportsbook kuyatholakala nakubadlali beselula noma ngabe basebenzisa iwebhusayithi esheshayo yokudlala noma uhlelo lokusebenza lweselula. Ngakho-ke, nabadlali beselula bathola ukufinyelela kumathani wokukhushulwa unyaka wonke.
Ngokuya ngezindlela zokukhokha, abadlali abasebenzisa iwebhusayithi ephathekayo noma izinhlelo zokusebenza zeselula bazothola ukuthi zonke izindlela zokufaka nokukhipha ezitholakala ku-akhawunti yabo yeMarathonbet ku-PC nazo ziyatholakala kuzinguqulo zeselula. Izinkokhelo nokuhoxa okwenziwe ngocingo nakho kubhalwe ngekhodi futhi kuvikelekile.
Ungadawuniloda kanjani i-App yokusebenza ku-Apple IOS
Ukuze usebenzise uhlelo lokusebenza lweMarathonbet ku-iPhone noma i-iPad, udinga ukuthi usebenzise okungenani i-iOS 5.0 noma ngaphezulu
Vakashela iwebhusayithi ye-Marathonbet kusiphequluli sakho se-Safari
Khetha ‘izinhlelo zokusebenza’ kumenyu kanhlokweni wesibili
Khetha ‘ukulanda ku-AppStore’
Dawuniloda futhi ufake uhlelo lokusebenza njenganoma yiluphi olunye uhlelo lokusebenza
Qalisa uhlelo lokusebenza bese ungena ngemvume usebenzisa igama lomsebenzisi nephasiwedi yakho ejwayelekile ye-Marathonbet
Ungadawuniloda kanjani i-App yokusebenza ku-Android
Ukuze usebenzise uhlelo lokusebenza lweMarathonbet kudivayisi yeselula ye-Android, udinga ukuthi usebenzise okungenani inguqulo ye-Android 4.1.2 Jellybean noma ngaphezulu
Vakashela iwebhusayithi ye-Marathonbet kusiphequluli se-Google Chrome noma i-Android
Khetha ‘ukulanda kwe-Android
Ifayela le-apk lilandwa ngokuzenzakalela, liqalise futhi ligijime ifayela le-.apk uma selilandwe
Uhlelo lokusebenza manje selufakiwe futhi luyatholakala kufasitelana lakho lohlelo lokusebenza
Ukudiphozitha noku khipha Imali e-Marathonbet
Izindlela ezitholakalayo zokufaka kanye nokuhoxa zabasebenzisi be-Marathonbet zingahluka ngokuya ngezwe abazinze kulo. Izinhlu ezingezansi zinembile kubadlali baseNingizimu Afrika nangesikhathi sokubhala. Ngaphezu kwalokho, enye indlela yokukhokha ayisekeli uhlobo oluthile lwemali. Izindlela zokukhokha ezishiwo ngezansi yilezo ezisekela amaRandi aseNingizimu Afrika kanye namaBitcoins. Uma ushintshela kumaDola aseMelika (ngokwesibonelo) uzobona ukuthi enye indlela yokukhokha isiyatholakala ukuze isetshenziswe.
Uhlu Lwezindlela Ezamukeliwe zoku Diphozitha
Mastercard R19.00 Akucacisiwe Ngokusheshayo
Maestro R19.00 Akucacisiwe Ngokusheshayo
Visa R19.00 Akucacisiwe Ngokusheshayo
Skrill R93.00 Akucacisiwe Ngokusheshayo
Neteller R93.00 Akucacisiwe Ngokusheshayo
Bank Transfer R185.00 Akucacisiwe 5-10 izinsuku zebhange
ecoPayz R93.00 Akucacisiwe Ngokusheshayo
AstroPay Card R19.00 Akucacisiwe Ngokusheshayo
Ungayenza kanjani Idiphozithi:
Khetha indlela yokukhokha oyithandayo
Faka imininingwane yendlela yokukhokha bese ulandela imiyalo esesikrinini
Faka inani lakho ofisa ukulifaka
Chofoza ‘Idiphozithi’ ukuze uqinisekise
Isimo sakho sediphozi siboniswa kumyalezo
Mastercard R93.00 Akucacisiwe 3 - 5 izinsuku zebhizinisi
Maestro R93.00 Akucacisiwe 3 - 5 izinsuku zebhizinisi
Visa R93.00 Akucacisiwe 3-10 izinsuku zebhange
Skrill R93.00 Akucacisiwe 24 - 48 amahora
Neteller R93.00 Akucacisiwe 24 - 48 amahora
Bank Transfer R3,684.00 Akucacisiwe 3-10 izinsuku zebhange
ecoPayz R93.00 Akucacisiwe 24 - 48 amahora
AstroPay Card R19.00 Akucacisiwe 24 - 48 amahora
Ungakwenza Kanjani Ukuhoxa noma Ukukhipha Imali
Chofoza ku-‘Donsa ‘
Faka inani ofisa ukulikhipha
Faka iphasiwedi yakho ye-Marathonbet
Umyalezo obonisa isimo sokuhoxa kwakho uyakhonjiswa
Amaphuzu Okuthengisa Ahlukile </ h3
I-Sportsbook + amakhasino agcwele e-inthanethi futhi i-live ekhasino ku-akhawunti eyodwa
Iselula enobungane nezinhlelo zokusebenza ezitholakalayo ze-Android ne-iOS
Amathani ezimakethe zezemidlalo ahlanganisiwe
Ukuchofoza okukodwa ukubheja okusheshayo
24/7 ukwesekwa ngengxoxo ebukhoma
Isekela ama-cryptocurrensets (Bitcoin)
Uhla olukhulu lwezimali ze-fiat lusekelwa
Isici se-Cashout siyatholakala
Iwebhusayithi enziwa ngendlela oyifisayo yokubukwa kanye namathuba wokumelwa
Ubukhoma Phakathi – dlala ukubheja okutholakalayo ezimakethe ezahlukahlukene zezemidlalo
Ukubheja okuphansi kakhulu okungu- € 0.10 kuvunyelwe
Izindlela eziningana eziphephile zokufaka idiphozi nokuhoxa
Ukusakaza bukhoma kutholakala kubadlali abangene ngemvume abanebhalansi evumayo
Iningi lamabhonasi ezigaba ze-sportsbook nezekhasino
I-UI Yewebhusayithi idinga ukuphakanyiswa noma ukulungiswa
Ayikho ibhonasi yokwamukela njengamanje
I-Marathonbet iyi-sportsbook eku-inthanethi enikela ngemikhiqizo ehlukahlukene yokubheja emicimbini yezemidlalo engaphezu kwenkulungwane nsuku zonke. I-sportsbook yamukela umdlali ovela eNingizimu Afrika, isekela amaRandi aseNingizimu Afrika futhi inikezela nangezindlela eziningi zokubhanga ezinobungane zaseNingizimu Afrika ezibandakanya amakhadi asebhange, ama-eWallet, ukudluliselwa kwamabhange, kanye neBitcoins. Zonke izindlela zebhange ziphephile futhi zivikelekile ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokubethela kwe-SSL yobuciko.
I-Marathonbet Casino inikeza indawo yokugembula eku-inthanethi ephephile futhi evikelekile futhi inamalayisense amane kanye nemvume eyodwa yokudlala i-inthanethi. Isebenze amashumi eminyaka futhi igcine irekhodi elihlanzekile nelithembekile kusukela lapho.
Imikhiqizo ye-Marathonbet ibingaphansi kokucwaningwa okuzimele nokuhlolwa ukuze kuqinisekiswe ubulungiswa nobuqotho bayo.
I-Marathonbet inikeza ukubhejela ezemidlalo ezimakethe zezemidlalo ezingu-50 +, ukubheja ezemidlalo bukhoma, ukusakazwa kwevidiyo bukhoma, ukunikezwa ngamabhonasi amaningi, imidlalo yekhasino, imidlalo yekhasino ebukhoma, i-E-Sports, ezemidlalo ebonakalayo, itoto, ezezimali kanye nomakhi. Iwebhusayithi yeMarathonbet inobuhle beselula kwiziphequluli ezahlukahlukene zeselula, iyatholakala njengezinhlelo zokusebenza zeselula zabasebenzisi beselula be-Android ne-iOS.
Ezinye zezinto ezihlukile ezinikezwa e-Marathonbet zifaka inketho eyodwa yokuchofoza-ukubheja, isici se-Advancebet, ikhono labadlali lokukhetha ukuthi izingqinamba zimelelwa kanjani nokuthi ukwakheka kwe-sportsbook kuvezwa kanjani – ungakhetha phakathi kokubuka kwe-multimarket, ukubuka okudala kanye ne-Asia buka kuye ngezintandokazi zakho.
Ukusekelwa Kwamakhasimende Nemininingwane Yokuxhumana
I-imeyili: [email protected] yemibuzo ejwayelekile nosizo, [email protected] yosizo oluhlobene nokufaka imali nokuhoxa
Ingxoxo ebukhoma yamalungu
Ukwesekwa kwefoni: + 44 1273 964706
Ngabe iMarathonbet isemthethweni eNingizimu Afrika?
I-Marathonbet ayisingathwa kumaseva akhiwe eNingizimu Afrika. I-Marathonbet isingathwa ngasogwini ngakho-ke ayithobeli umthetho nemingcele yokugembula yaseNingizimu Afrika eku inthanethi. Ngakho-ke, i-Marathonbet casino ayiphuli ngokomthetho ngokuvumela abadlali baseNingizimu Afrika ukuthi babhalise futhi badlale eMarathonbet.
Ngabe i-Marathonbet iphephile?
Yebo, i-Marathonbethas ibisemakethe isikhathi esingaphezu kwamashumi amabili eminyaka futhi bathembeke kakhulu. Idatha yabo ivikelwe ngokubethela kwe-SSL. Ngaphezu kwalokho, baphethe amalayisense avela kumakhomishini amane okugembula ahlukene. Yonke imikhiqizo yabo ilungile futhi iqinisekisiwe ukuthi injalo ngokusebenzisa ukuhlolwa okuzimele nokuhlolwa.
Isebenza kanjani i-Marathonbet?
I-Marathonbet yimali yangempela yezemidlalo eku inthanethi yezinsizakalo kanye nensizakalo yekhasino. Ukuze usebenzise lezi zinsizakalo, udinga ukuthi okungenani ube neminyaka eyi-18 ubudala. Ukuqala ukubheja, udinga ukubhalisela i-akhawunti bese uxhasa i-akhawunti yakho ngemali ethile.
Ngabe ngidinga ukuxhumana kwe-inthanethi ukuze ngidlale kuhlelo lwe-App?
Yebo, uhlelo lokusebenza ludinga i-inthanethi ukusebenza okungaphazanyiswa nokungenamthungo.
Ngibhalisa kanjani e-Marathonbet?
Ukubhalisa e-Marathonbet kulula. Vele uchofoze kunkinobho yokujoyina manje bese ugcwalisa ifomu lokubhalisa ngemininingwane enembile njengoba kukhonjisiwe kwi-ID yakho kanye nemibhalo yobufakazi bekheli. Ngokusayina, wamukela inqubomgomo yobumfihlo kanye nemigomo nemibandela. Uyaqinisekisa futhi ukuthi ungaphezu kweminyaka engu-18.
Ngabe ngizocelwa noma yimiphi imininingwane lapho ngibhalisa e-Marathonbet?
Hhayi ngesikhathi sokubhalisa.
Ngabe iMarathonbet inokukhetha ukuphuma kwemali?
Yebo, i-Marathonbet isanda kwethula inketho yokuphuma kwemali abayimaketha njengephromoshini.
Ngingakwazi yini ukushintsha ikheli le-imeyili ebengilisebenzisa ukubhalisa i-akhawunti yami?
Xhumana nokwesekwa kwamakhasimende e-Marathonbet
Ngingayivala i-akhawunti yami ye-Marathonbet?
Angikwazi ukungena kuhlelo le-App lweselula. Kumele ngenzeni?
Uma uhlelo lokusebenza lweselula lungasebenzi njengoba lwenzelwe, ukuxhumana kwe-inthanethi kuyicala elijwayelekile ezimweni eziningi. Hlola ukuxhumeka kwakho kwe-inthanethi uphinde uzame futhi.
Ngingaxhumana kanjani nokusekelwa kwamakhasimende?
Ukwesekwa kwamakhasimende kusebenza 24/7
Ngabe imidlalo yekhasino kuselula iyafana nenguqulo yedeskithophu? Uma kungenjalo, ngabe basenokungalingani okufanayo kanye nesilinganiso sokukhokha
Yebo, imidlalo yekhasino iyafana kuwo womabili ama-PC neselula. Noma kunjalo, okumbalwa kungenzeka kungatholakali kuselula.
Ngabe amadiphozithi nokukhipha imali kuphephile?
I-Marathonbet isekela kuphela izindlela zebhange eziphephe ngokuphelele nezifakazelwe. Abadlali baseNingizimu Afrika bangasebhange besebenzisa iMastercard, iVisa, iMaestro, iSkrill, iNeteller, iBank Transfer, i-ecoPayz ne-AstroPay Card. Konke lokhu kuphephile futhi imininingwane yalokhu kuthengiselana ivikelekile ngokubethela kwe-SSL okungama-128-bit.
Ngingayisebenzisa yini i-akhawunti efanayo engibhalise ngayo ku-App yeselula lwenguqulo yedeskithophu?
Ungabhalisa i-akhawunti eyodwa bese uyisebenzisa ku-PC, kuwebhusayithi yeselula nakuhlelo lokusebenza lweselula. Eqinisweni, ngokwemigomo nemibandela yeMarathonbet, abadlali abasebenzisa ama-akhawunti amaningi bephula izinqubomgomo zabo futhi bangavinjelwa. Ngakho-ke, sikhuthaza ukuthi udale kuphela i-akhawunti eyodwa ye-Marathonbet umdlali ngamunye / umndeni ngamunye.
Ingabe ukubheja okungaphakathi kokudlala kutholakala ngenguqulo yeselula?
Ukubheja okuphakathi nokudlala kuyatholakala ezimakethe ezithile zezemidlalo izinhlobo zokubheja zokudlala – ukudlala ukubheja aziningi kangako ekubhejeleni ezemidlalo okuzayo. Kodwa-ke, noma ngabe udlala ku-PC, iwebhusayithi yeselula noma uhlelo lokusebenza lweselula, ukubheja bukhoma kuyatholakala kuwo wonke amapulatifomu. Uhlelo lokusebenza leselula libuye lunikeze ngesici sokubheja esisheshayo sokubheja bukhoma futhi.